“Real Madrid waxa ay isu difaacday sida koox 10-jiro ah” – Gool FM
“Real Madrid waxa ay isu difaacday sida koox 10-jiro ah”
(Madrid) 07 Abriil 2016. Steve McManaman waxa uu eeda dusha uga tuuray qaab difaaceedkii Real Madrid intii ay socotay kulankii Champions League ee ay Wolfsburg 2-0 ku garaacday, waxa uu Los Blancos ku edeeyey qaladaadka.
Labadii gool ee ay qeybtii hore dhaliyeen Ricardo Rodriguez iyo Maximilan ayaa qarka u saaray wiilasha Zinedine Zidane ka harida Champions League, waxaana la fili karaa sanad bilaa koobab ah oo ka dhacda gegida Santiago Bernabeu.
McManaman oo la soo ciyaaray Zidane xilligiisii kooxda ka dhisan caasimada Spain, aya farta ku fiiqay afartii daafac – gaar ahaan laba reer Brazil ee garbaha ka ciyaarayey.
“Waxaan qabaa in ay aad u liiteen, sidaas ayaan xaqiiqdii qabaa,” ayuu McManaman u sheegay BT Sport.
“In aad hesho natiiddii sare ee sabtida iyo xaqiiqddii meel aad u hooseysa caawa.
“Daafac ahaan dambeedka midig [Danilo] iyo dambeedka bidix [Marcelo] goobaha oo dhan ayey ku dhex yaac sanaayeen, waxa ayna u ekaayeen sida Pique iyo Pepe oo aan waligood wada dheelin.
“Waxaa yaab I baday sida ay u xumaayeen. Waxaan filayey degenaan dhab ah, bandhig miisaaman sidoo kale.
“Waxa ay la mid ahayd sida ciyaal School, oo ka hooseeya da’da 10 ama 12 sida uu daafaca ahaa. (Goolka labaad) Marcelo waxa u soo dhaqaaqay garbihiisa oo ka ka dambeya halka Arnold uu laba talaabo ka hor maray Ramos.”
McManaman, hase yeshee, sheekada kuma uusan eedeen laacibkii ay mar Real ka wada tirsanaayeen mushaakilka, laakiin waxa uu dhaleeceyey safka oo hareer maray kaartadii loo soo dejiyey.
“Waxa ay u ekeed in tababaraha uu banaanka ku duceysanayey in ay wada jir noqdaan. Waxa ay u muuqataa in ay iskood isaga ciyaarayeen,” ayuu ku daray
“Argagax oo kaliya ayey u egtahay. Ma edeen kartid tababaraha uun maxaa yeelay waxa uu ciyaar siiyey isla kooxdii ka hor tagtay Barcelona sabtidii – marka laga yimaado Danilo – ‘Taga oo sameeya.’
Dhinaca Spain waxa au hada isku dayi doonaan in ay ka soo kabtaan labada gool lugta labaad oo dhici doona 12-ka Abriil.
Pellegrini: Qaladaad ayaa na saameeyey